Vovonana GV 2017: Ilay Tsipika Manify Manasaraka Ny Fifankatiavana Sy Ny Fiaraha-mitolona · Global Voices teny Malagasy
Vovonana GV 2017: Ilay Tsipika Manify Manasaraka Ny Fifankatiavana Sy Ny Fiaraha-mitolona
Voadika ny 20 Desambra 2017 11:38 GMT
Sady tsy manahy aho no tsy diso fanantenana satria tsy dia niandrandra na inona na inona. Saiky tamin'ny fotoana rehetra, nientanentana aho no sady liana.
Saingy rehefa nipoitra tao anaty lisitr'ireo Mpanatrika ny Vovonana 2017 tao Colombo ny anarako, somary nahatsiaro sahiran-tsaina ihany aho. Tsy mbola tafiditra ho isan'ny GV tamin'izany làlana izany mihitsy aho. Eny, tiako ny GV, mampitolagaga ahy ny asan'ireo GVers rehetra ary feno fankasitrahana aho fa isan'ny ao anatiny, saingy ity no tena zavatra:: tsy tena mbola ao aho, tiako ny tsy mahalàla. Tiako ny sady tsy iza no ny rehetra ihany koa. Mandrakariva dia mangetaheta hahafantatra aho ary dia eto, tena eto, ary halako ny marika famantarana, ireo saina kely, ireo lohateny sy famaritana. Toy ny fameperana no fahitàko azy ireny ary boaty kely anidiana ny mari-pamantarana ny tsirairay. Araka izany, tsy azoko antoka raha ho isan'izay tafiditra ao anatiny aho.
Ampy hanaisotra ireny eritreritra rehetra ireny ny andro voalohany nanaovana fivoriana anatiny, nahazoako toky fa tena tonga amin'ny toerana niriako haleha tokoa aho, tena manao izay zavatra tiako natao.
Ny andro faharoa, nanomboka niaina zavatra tena vaovao tanteraka tamiko aho; ny fiaraha-mitolona. Mifampizara fanantenana iraisana sy faniriana tsara amin'olona ary mikaroka fomba hanatanterahana izany. Hitako maso ilay fahamarinana tsy azo tsapain-tànana lasa fitaovana azo tsapain-tànana sy tetikady azo ampiharina.
Ny andro fahatelo aho nifoha toa tanaty nofinofy, voahodidina namana maro izay afaka nihaino tamim-pahalinana fatratra sy manakatra tsy misy fepetra. Nampihetsi-po tsy araka izay nandrasana no sady tsy nampino fa tena nahafinaritra ny zavatra rehetra.
Avy eo ny andro sisa rehetra tamin'ilay vovonana nolaniako niainana tao fahasambarana izay tsipika kely manasaraka ny fifankatiavana sy ny fiaraha-mitolona izay, mikisakisaka miala amin'ny asa mankamin'ny fisiana, manao zavatra izay misy lanjany amin'ny zavatra izay misy lanjany ho any rehetra, ary ny fiarahana tsotra fotsiny izao, miaraka misotro kafe na misakafo, mandehandeha eny amin'ny morontsiraka, mitango resaka any anaty fiara fitaterambahoaka.
Taorian'ny vovonana, nandeha irery nitetitety aho. Tsaroako ny resaka kely madinidinika nifanaovako taminareo tsirairay avy, izay fisaintsainana, torohevitra, hanihany, tantara mahafinaritra rehetra, tehiriziko anaty hitoetra mandrakizay ireny.
Noho izany, misaotra anareo rehetra, tsirairay avy, noho ny maha-ianareo anareo, ary miala tsiny tamin'ireo fotoana somary nampitsingevana mety nanapaka ny fifampiresahantsika. Nihaino foana aho. Tsy izany fa tena tototra marina tokoa na nandritra ireo andro nisian'ny vovonana na taoriany.
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 1 andro izay